Chrome Apps dzakatoseta zuva rekupera. Ichave muna 2022 | Linux Vakapindwa muropa
Google ikambani inozivikanwa ne, pakati pezvimwe zvinhu, ichitipa nemasevhisi mazhinji, asiwo nekuvagumisa. Imwe yeaya masevhisi achafa munguva pfupi iri kutevera ndeayo eiyo ChromeApps, ayo ari webapps anomhanya mukati meGoogle Chrome browser. Nezuro, kambani yemutsvaki rakaburitsa chinyorwa umo maakatiudza nezveramangwana rezvishandiso zveGoogle, kutanga nenyaya yekuti munaKurume kunyorera hakuchazogamuchirwa muChannel Web Store.
Iyo nzira yemugwagwa, iyo yatinozo tsanangura pazasi, ichaguma muna Chikumi 2022, apo Chrome Apps inotsigira pa Chrome OS inopera kune vese vatengi. Nekukurumidza, sekuwanda muna Zvita wegore rino, zvikumbiro zveGoogle zvichamira kushanda paWindows, macOS neLinux, asi hapana chekufunganya pamusoro (zvakawandisa) nekuti pane dzimwe nzira, kubva pakuona kwangu, kusimudzira ruzivo rwunopihwa neinjiniya yekutsvaga browser.
1 Muna Zvita 2020 Chrome Apps inomira kushanda pane asiri-Chromebook makomputa
2 Ndinofanira kunetseka here?
Muna Zvita 2020 Chrome Apps inomira kushanda pane asiri-Chromebook makomputa
Iyo purogiramu yekufa kweGoogle maapps ndeiyi inotevera:
Kurume 2020: Iyo Chrome Web Chitoro inomira kubvuma nyowani Chrome Maapplication. Vagadziri vanofanirwa kukwanisa kugadzirisa zviripo kusvika Chikumi 2022.
June 2020: Tsigiro ichaguma paWindows, macOS, uye Linux. Chrome Enterprise uye Chrome Yekusimudzira Vashandisi vachakwanisa kuwana kwavo mutemo kuwedzera rutsigiro kusvika Zvita 2020.
Zvita 2020: Tsigiro yeWindows, macOS, uye Linux zvichapera zvachose.
June 2021: Kutsigira kweNaCl, PNaCl uye PPAPI APIs kunopera.
June 2021: Chrome OS rutsigiro ichaguma zvakare. Chrome Enterprise uye Chrome Dzidzo Vashandisi vanozove nekwaniso kumutemo wavo wekuwedzera rutsigiro kusvika Zvita 2022.
June 2022: Chrome Apps rutsigiro ichaguma pa Chrome OS kune vese vashandisi.
Shanduko iyi haina chekuita nekuwedzera kweChannel. Muchokwadi, icho ndechimwe chesimba reGoogle browser uye kana paine kuwedzerwa kunoshanda sewebhu webhu, icharamba ichidaro.
Ndinofanira kunetseka here?
Pakutanga, kwete. Chrome Apps ndedzechokwadi webapps akaisirwa kubva kuChannel Web Chitoro, asi Chrome inotipawo mukana wekugadzira webapps kubva pane imwe sarudzo yakanyatsogadzirirwa iyo. Semuenzaniso, kana tichida kugadzira Twitter appIsu tinongofanirwa kuenda kuchikamu nemapoinzi matatu / Zvimwe zvishandiso, sarudza «Sevha yakanangana nekuwana» uye tarisa bhokisi «Vhura sehwindo». Iko kunyorera kuchaonekwa mune yekutanga menyu yezvakawanda zvekuparadzirwa kweLinux. Zvakare, mazhinji makuru ebasa rewebhusaiti anowirirana neProgressive Web Apps, saka hatina chatinofanira kutya… mune dzidziso.
Dambudziko rega randinoona, zvirinani izvozvi muna Ndira 2020, nderekuti pane mashandiro asina chekuita newebhu masevhisi, senge ARC Welder. Kunyangwe isingashande chaizvo nema APK mazhinji, ARC Welder Iyo inotibvumidza isu kumhanyisa Android kunyorera muChannel uye mukana uyu unenge warasika zvachose kana usisipo kuburikidza neChannel Web Chitoro. Kune akawanda mapurojekiti ekumhanyisa / kuyedza maapplication eApple pamakomputa edesktop, asi ini ndinotaura pane izvi se "zvinopesana" izvo Google Apps zvinomira kushanda
Chero zvazvingaitika, Chikumi 2022. Chrome Apps dzine makore maviri nehafu ekurarama.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chrome Apps dzakatoseta zuva rekupera. Ichave muna 2022
Manjaro ichakurumidza kurodha yekutanga yakagadzikana vhezheni ye2020